Ọ dịwo anya a mara na ọtụtụ nsogbu ezinụlọ mere ikwu na enweghị obi ike. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-agaghị ghọgburu na, anyị ga na-agbalị iledo na anyị ịrịba ama ndị ọzọ na ụzọ dị iche iche.
Ga-amasị m na-eme ka uche gị exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone, nke tracks ọ bụla smartphone gị nhọrọ. Ọ ga-kwuru na isi atụmatụ a mobile nnyocha ngwa na-nlekota oru na SMS ozi, oku akụkọ ihe mere eme, e-Gburu, vidiyo na foto; nsuso onye na ọnọdụ site GPS; Ndekọ na gburugburu gburugburu lekwasịrị iphone nledo.
Ọzọkwa, na exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone na-agba ọsọ invisibly ọ bụla smartphones ma na-enye gị ezi ozi na-adọ n'ụzọ.
Ebee ka ike a exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone etinyere?
Ọ dị mkpa iburu n'obi na exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone ike ga-eji na idozi kasị ndụ nsogbu, informational leakage na ụlọ ọrụ mmepụta ihe onye sabo, ụmụ nchekwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị na-ekwuru, na exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone bụ trouvaille n'ihi na anyị niile n'ihi na ọ na-enyere aka na-anya na ndị òtù ezinụlọ. Na mgbakwunye, n'elu-kwuru mobile nnyocha software na-enye anyị na ohere pụrụ iche idekọ na gburugburu ebe obibi nke lekwasịrị anya na ekwentị na-enweta ezi GPS ọnọdụ. Ikpeazụ ihe-arụ bụ ọrụ dị mkpa na-echebe ụmụ site na iji ọgwụ ọjọọ riri ahụ na ndị metụtara ha commiting ụdị ọ bụla nke mpụ.
Summing ya, Ekwenyere m nke ahụ exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone, ga-bara uru n'ihi na mmadụ nile na idozi nsogbu ha. Ọ dị mkpa ka na-echeta na anyị nwere ike ijikwa ọ bụla nsogbu igosi na anyị ndụ. Ma ọ bụghị, ọ ga-agaghị eme.
Free mobile inyocha ngwa n'ihi na iphone
Na exactspy-Free Mobile Nledo Software N'ihi na iphone na ị ga-enwe ike:
Ị nwere ike Download: Would You Like Free Mobile Spy Software For iPhone ?
Free ekwentị nlekota oru software, Free mobile inyocha ngwa n'ihi na iphone, Free mobile nledo software n'ihi iphone, Mobile spy smartphone monitoring software download, Spyware n'ihi na ekwe ntị